थर्मोमिक्सको साथ हेक र गाजर प्यापिलोट विधि ThermoRecines
हेक र गाजर प्यापिलोट
माछा45 मिनेट2 व्यक्ति200२ क्यालोरी
तपाईं जस्तो अर्को दिन भने हरेक पटक म उसलाई बढी मन पराउँछु वरोमा। यो केहि ठूलो भाँडा हो तर व्यंजनहरू अल वाष्प तिनीहरूलाई उत्तम बनाउँछ। आज, यो कसरी हुन सक्दछ, हामीसँग खाने माछा छ: ह्याक र गाजर प्यापिलोट.
यो एक धेरै साधारण र तपस्यात्मक विधि हो जुन हामी समयको समयमा गर्छौं, त्यसोभए आउनुहोस् हामी हेरौंH यसको स्वादिष्ट hake र गाजर papillote तयार गर्नका लागि ओ।
हाके भित्र गरौं कागज जुन तपाइँलाई पहिले नै थाहा छ, कागजमा लुकाउने खाना समावेश गर्दछ ताकि यसले आफ्नै रसले पकाउँदछ, यसका सबै स्वादहरू र सुविधाहरू सुरक्षित गर्दै।
यो गर्नका लागि राम्रो अवसर हो एकै समयमा दुई रेसिपीहरू र ऊर्जा र समयको फाइदा लिनुहोस्। क्रीम, केही अण्डाहरू वा कुनै पनि नुस्खा पकाउनुहोस् जुन गिलासमा उच्च तापक्रम प्रयोग गर्दछ र माछालाई भेरोमामा राख्नुहोस्। कुनै पनि समयमा हामीसँग खाना तयार हुनेछ!
1 हेक र गाजर प्यापिलोट
ह्याक र गाजर प्यापिलोट एउटा यस्तो नुस्खा हो जसले रेखाको ख्याल राख्न मद्दत गर्दछ र जसमा स्वादहरू यस प्रणालीको साथ बनेको बृद्धि गरिन्छ।
तयारी समय: 5M
खाना पकाउने समय: 40M
ह्याकका २ स्लाइसहरू
G 15 ग्राम जैतुनको तेल
Table चम्मच नीबूको जुस
१२ mineral ग्राम खनिज पानी
१ मिठाई चम्चा मह
चुटकी मैदान दालचिनी
सफा माछा निम्बू, एक चुटकी नुन र अर्को कालो मिर्चको साथ मरीन गर्नुहोस्। हामी तरकारीहरू तयार पार्दा फ्रिजमा छोड्नुहोस्।
यसको लागि खुली प्याज काट्नुहोस् Seconds सेकेन्ड गतिमा। ब्लेडमा चिप्स कम गर्नुहोस्। गाजर स्क्र्याप्ड, धोएर पातलो स्ट्रिपहरूमा काट्नुहोस्। समयमा पोच Minutes० मिनेट, १००º, गति १, बाँया पालो।
पानी, मह, एक चुटकी दालचीनी र मौसम जोड्नुहोस्। लागि कुक Minutes० मिनेट, १००º, गति १, बाँया पालो। जब समय तालिका समाप्त हुन्छ २ मिनेट, वरोमा तापमान, गति १, बाँया पालो, बेकर बिना ताकि पानी राम्रोसँग वाफ हुन्छ। हटाउनुहोस् र रिजर्भ गर्नुहोस्।
गिलासमा g०० ग्राम धारा पानी राख्नुहोस्, को लागी तातो गर्नुहोस् Minutes मिनेट, १००º, गति १। बेकिंग कागज वा एल्युमिनियम पन्नीको दुई वर्ग काट्ने क्रममा। प्याज र गाजरको साथ ओछ्यान बनाउनुहोस्। ह्याकको टुक्राको साथ शीर्ष। कसको कुनै पनि उद्घाटन बेवास्ता गर्न बन्द गर्नुहोस्। ह्याकको अन्य स्लाइसको साथ अपरेशन दोहोर्याउनुहोस्। प्याकेजहरू वरोमामा राख्नुहोस् र यो स्थितिमा छ। कार्यक्रम Minutes मिनेट, Varoma तापमान, गति १।
भेरोमा हटाउनुहोस् र स्टीम जलाउनबाट जोगिनको लागि बाहिरतिर खोल्नुहोस्। प्याकेजहरू हटाउनुहोस्, तिनीहरूलाई प्लेटमा राख्नुहोस् र तुरून्त सेवा गर्नुहोस्।
थप जानकारी - हेमको साथ सिमी र हरियो मिर्च
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: माछा, इस्टर रेसिपीहरू
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » माछा » हेक र गाजर प्यापिलोट
मैले १० मिनेट बढी ह्याक छोड्नुपर्‍यो किनभने यदि यो कच्चा थिएन भने
Lorenak लाई जवाफ दिनुहोस्
नमस्ते lorenak !!
मलाई खुशी छ कि तपाईले नुस्खा बनाउनु भयो र म आशा गर्छु तपाईले यो मनपराउनु भयो
खाना पकाउने समयलाई असर गर्ने धेरै कारकहरू छन्; स्लाइसको मोटाई, चाहे यो ताजा हो वा स्थिर हो र, सबै भन्दा माथि, टुक्राको प्रकार यस प्रकारको टुक्रा कोलाको सम्पूर्ण टुक्रा जस्तै हुँदैन।
जे भए पनि तपाईले धेरै पकाउँदा खाना पकाउनु भयो। जे होस् Thermomix धेरै राम्रो खाना पकाउँछ, त्यहाँ एक व्यक्ति जो खाना पकाएको अनुभव को रूप मा केहि छैन!
सत्य यो हो कि तिनीहरू एक औंला बाक्लो स्लाइसहरू थिए, तिनीहरू सबै मोटा थिएनन्, तर १० मिनेट माछा पकाउन अति थोरै हुन्छ, के कसैले १० मिनेटमा गरेको छ?
तपाईंलाई पहिले नै थाहा छ, हामीले प्रकाशित गरेका सबै रेसिपीहरू हामीद्वारा बनाइन्छ, जाँच्दछ र फोटोग्राफर गर्छन्, तर पनि त्यहाँ केही कारकहरू हुन्छन् जुन सधैं एक समान हुँदैन।
यदि तपाईले देख्नुभयो कि ह्याक १० मिनेटमा गरिएन भने तपाई थप समय थप्न सक्नुहुन्छ।
इस्टरको लागि इस्टर केक
एप्पल कम्पोटको साथ होरचटा तोरियजास